Ndị ọkachamara na Semalt na-adọ aka ná ntị banyere ndị Spammers kasị ukwuu n'ụwa. Na-echekwa!
Ọ bụrụ na ịnweta ọtụtụ ozi ịntanetị na njikọ maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ ndị na-arịọ maka ego, enwere ohere na onye spammer chebara ID gị echiche ma malite iziga gị ozi ezighi ezi. Na ọkara mbụ nke 2011, ọtụtụ n'ime spam na igbe igbe anyị na-abịa site na India. Ka ọ na 2016, mba ndị na-ezipụ spam bụ India (20%), Indonesia (13%), Russia (10%) na South Korea (12%).
Nik Chaykovskiy, Onye Ọrụ Ndị Nlekọta Ndị Na - ahụ Maka Ndị Nlekọta Ọkachamara , na - ele anya na ihe ndị kachasị mkpa banyere spam ụwa.
Russia bu ndi a ma ama maka ndi cybercriminals na ndi agha dika Facebook. Dị ka Trend Micro, nke bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ California, nke na-ewu ewu, Russia na-ebute ihu ugbu a mgbe ọ na-abịa na ntanetị na spam. Akụkọ Trend Micro na-ekpughe na ihe ndị a na-ahụ anya dịka ọnwụ ọnwụ nke ọkụ Whitney Houston, ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ụwa nile, na Linsanity nyere cybercriminals ihe ọhụrụ na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na echiche mgbasa ozi. O nyeere ha aka ịbanye ma banye ọtụtụ ọnụọgụ email na netwọk iji nweta data anyị onwe anyị.
Ruo pasent 80 nke spam maka ndị na-elekọta mmadụ karịrị otu narị na ise, ha niile bụ otu ìgwè na-agba afa. Aha nke òtù a bụ Spamhaus. Ndenye ya nke Ụlọ Ọrụ Spam Operations (ROKSO) nchekwa data emeela ọtụtụ nsogbu maka ndị ọrụ ịntanetị..Afọ ole na ole gara aga, spammer nke Ukraine zigara ọtụtụ nde malware na nje virus site na iji nkà na ụzụ botnet. Onye nabatara ebe nrụọrụ weebụ spammer bụ ụlọ ọrụ weebụ ntanetị nke China, Trend Micro kọrọ. Michael Boehm na Associates bụ nzukọ America, nke gụnyere ọtụtụ ndị spammers. Ha zipụrụ spam na nje virus na-akpaghị aka na ịntanetị, na-emepụta nsogbu maka ndị ọrụ dị iche iche. Ebumnuche ha bụ isi ka e depụtara ha, ha na-arụkwa ọrụ n'okpuru ịzụ ahịa na aha mmadụ.
Yair Shalev bụ onye spammer si na Florida. Ya na RAMSO spammer, Darrin Wohl, na-emepụta nkà na ụzụ iji bibie ọtụtụ kọmputa na ngwaọrụ mkpanaka n'ụwa niile. Dante Jimenez bụ onye spammer nke na-arụ ọrụ na United States. O tinyere aka na oru di iche iche nke botnet nke bu ndi ozo bu ndi na-acho ndi sava na ulo oru mgbasa ozi a ma ama. Peter Severa bụ onye Spammer ọkachamara nke Russia dere ma rere ụdị nje virus dị iche iche, spamware, na botnets maka ọtụtụ nde ijeri dollar. O tinyere aka na ide na ịtọhapụ nsogbu ndị kasị njọ ụwa na nje virus. O sorola ndị Spammer dị iche iche nke Europe na nke America rụọ ọrụ, ya na onye Spammer, bụ Alan Ralsky, na-esonyere ya.
Michael Fisaud jidere FBI ọnwa ole na ole gara aga. O tinyere aka na aghụghọ dị iche iche, e boro ya ebubo maka arụmọrụ dị iche iche. Yambo Financials bụ onye Spammer nke ọzọ bụ onye tinyere aka na cybercrimes dị iche iche. Ọ mepụtara ọtụtụ ihe omume pirated ma rere ha maka nde dollar. O tinyekwala akụ na-adịghị ọcha na ịntanetị ma zụọ ego dị ukwuu site n'akụkọ ụlọ akụ ziri ezi. Ka ọ dị ugbu a, a na-ebo onye spammer a ebubo nke cybercrimes dị iche iche, ndị FBI na-esokwa ya. N'oge na - adịghị anya, a ga - ejide ya, Trend Micro na - akọ.